Ahoana ny fanovana ny fahita matetika amin'ny fanamarinana ireo fanavaozana lozisialy ao amin'ny OS X | Avy amin'ny mac aho
Ny fanavaozana ny lozisialy, indrindra ireo izay mifandraika amin'ny rafitra fiasa, dia takiana hatrany ny mametraka sy ny haingana no tsara kokoa, satria amin'ny ankapobeny dia mazàna izy ireo mamaha bibikely na bitika lehibe ao amin'ny rafitra fiasanay. Amin'ny fotoana maro, na eo aza ny famaritana aseho amin'ny fametrahana azy, ny fanavaozana dia tsy vitan'ny hoe mamaha ilay olana hita ihany, fa manatsara ihany koa ireo bibikely kely hafa hitan'ny mpampiasa sasany isan'andro.
Ny OS X taloha dia namela anay hikirakira amin'ny alàlan'ny menio preferences ny fahita matetika nanamarinana raha nisy fanavaozana vaovao tao amin'ny Mac App Store, saingy nesorina io safidy io taona vitsivitsy lasa izay ary ny rafitra no mandeha ho azy iza no manamarina raha nisy fanavaozana vaovao navoaka na tsia.
OS X dia apetrakao matetika ny fe-potoana fizahana fanavaozana App Store isaky ny fito andro. Mety ho fotoana lava be ho an'ny sasany izany ary fohy ho an'ny hafa. Araka ny nolazaiko etsy ambony, amin'ny alàlan'ny menio Preferensi dia tsy azontsika atao ny manova ny matetika zahao ireo fanavaozam-baovao, noho izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Terminal izahay hahafahana manova ny vanim-potoana izay tadiavinay ny OS X hanamarina raha nisy fanavaozana napetrakay na nohavaozina na tsia.
Ovao ny fizahana matetika momba ny fanavaozana ao amin'ny OS X
Miakatra aloha isika ny varavarankely Terminal, na amin'ny alàlan'ny Launchpad na amin'ny Spotlight, amin'ny alàlan'ny fanoratana ao amin'ny boaty fikarohana Terminal.
Tsy maintsy manao izany isika izao apetaho ity lahatsoratra manaraka ity "Defaults manoratra com.apple.SoftwareUpdate JadualFrequency -int 1" tsy misy teny nalaina.
Ny isa 1, apetraka amin'ny farany dia midika hoe isaky ny firy andro no tadiavintsika ny OS X hijerena ny vaovao farany vaovao ao amin'ny App Store.
Raha vao nametraka ny vanim-potoana irina isika dia tsy maintsy hamerina ny Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Ahoana ny fanovana ny fahita matetika amin'ny fanamarinana ireo fanavaozana lozisialy ao amin'ny OS X